Ilaka Est no anatanteraha ny Sport scolaire 2014 ho an’ny faritra Atsinanana
Tanora 109 no solontenan’ny CISCO Toamasina I
Hianga ny alahady 24 aogositra ireo solontenan’ny CISCO Toamasina I, handray anjara amin’ny fifaninanana ara-panatanjahantena antsekoly aty amin’ny faritra Atsinanana, izay atao any Ilaka Est distrikan’ny Vatomandry, ny 25 hatramin’ny 29 aogositra. Raha ny loharanom-baovao voaray dia hotonga handray anjara avokoa ny CISCO miisa 7, izay mandrafitra ny faritra Atsinanana. Araka ny fantatra ihany koa fa dimy ireo taranja hifaninanana isan’izany ny Basket Ball, Hande ball, Voley Ball, Foot Ball, Atletisme ary ahitana sokajin-taona zandriny indrindra 13 taona ary 17 taona ny zokiny indrindra.
Raha ny nambaran’i Atoa TOTO Jean Alphonse izay tompon’andraikitra voalohany ao amin’ny taranjam-panatanjahantena eto amain’ny fari-piadidim-pampianarana Toamasina I dia tanora 109 no solontenana’ny CISCO ny Toamasina I izay ahitana mpanazatra isantsokajin’ireo taranjam-panatanjahantena hifaninanana. Fantatra ihany koa samy nahazo fahazahoan-dalana avy tamin’ny Ray aman-dReniny avokoa ny mpilalao tsirairay hiatrika izany.
Iantohan’ny CISCO avokoa ny fikarakarana sy ny lany rehetra mandritran’ny 5 andro anaovana ny fifaninanana any Ilaka Est.
Tsahivina ihany koa fa ny CISCO I na ny CISCO ny Toamasina I no mandrombaka ny medaly volamena betsaka indrindra tato anatin’ny faritra Atsinanana, tamin’ny taon-dasa.
(72) Prud′Homme RAKOTOSON : 20-08-2014 - 18:30